सीमा क्षेत्रमा फेरी भारतको दादागिरी, नेपाली बस्ती डुब्दा समेत किन मौन बसेको छ ओली सरकार ? — Imandarmedia.com
सीमा क्षेत्रमा फेरी भारतको दादागिरी, नेपाली बस्ती डुब्दा समेत किन मौन बसेको छ ओली सरकार ?
काठमाडाैं । सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा भारतले नेपाली भूभागलाई थप असर पुग्ने गरी बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण कार्य जारी राखेको छ । केही स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को पहलमा काम रोकिए पनि दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाल, सडक, बाँध/तटबन्ध निर्माणका काम भारतले धमाधम अघि बढाइरहेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका यस्ता संरचनाका कारण बर्खायाममा नदी–खोलाको बहाव रोकिँदा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । झापा मेचीनगर नगरपालिका–५ र ६ को पारिपट्टि दार्जिलिङ जिल्लामा पर्ने छोटामुनी ग्राम पञ्चायत मियाँ बस्तीको डुबान र कटान रोकथाम गर्न भन्दै भारतले मेची नदीको किनारामा १० मिटर उचाइ र १४ मिटरसम्म चौडाको ढुंगाको तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । अहिले २ किमि तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ । यसले नेपालपट्टि नकलबन्दादेखि काँकडभिट्टासम्मको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै स्थानीय चिन्तित छ ।
सशस्त्र प्रहरीको २६ नम्बर गणका एसपी महेश अधिकारीले भारतले सिमाना आसपास अहिले कुनै पनि सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम नगरेको बताए । पश्चिम नवलपरासीमा सनहीदेखि कुडियासम्म १६ सीमास्तम्भ भए पनि सुस्ताको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमास्तम्भ छैन । सीमास्तम्भ नभएका ठाउँमा खोला, रूख वा अन्य जैविक सिमानाको भर पर्दा जोतभोगका विषयमा सीमावर्तीका नागरिकबीच पटकपटक विवाद हुने गरेको छ । इकान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको ।